अष्ट्रेलियाले पहिलो पटक सेमिफाइनलमा हार्नुका ३ कारण | Hamro Khelkud
जापानमा दोस्रो मैत्रीपूर्ण रनिङ कप भलिबल हुँदै
बलिङ प्रशिक्षकका रुपमा वेंकटराम नेपालमा
पुनमसहित सागलाई बक्सिङबाट १६ खेलाडी छनोट
‘साफ यू १८ का लागि तयारी पुरा’-एन्फा
लन टेनिस खेलाडीको विदाई
नेयमारमाथिको प्रतिबन्ध घट्यो !
अष्ट्रेलियाले पहिलो पटक सेमिफाइनलमा हार्नुका ३ कारण
शुक्रबार, अषाढ २७, २०७६
एजेन्सी – साविक विजेता अष्ट्रेलिया एकदिवसिय विश्वकप २०१९ को सेमिफाइनलबाटै घर फर्किएको छ । बिहीबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा अष्ट्रेलिया घरेलु टोली इंग्ल्यान्डसँग ८ विकेटले पराजित हुँदै बाहिरिनु परेको हो ।
इंग्ल्यान्ड २७ वर्षपछि विश्वकपको फाइनलमा प्रवेश गर्दा अष्ट्रेलिया पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पराजित हुँदै बाहिरिनु पर्यो ।अष्ट्रेलियाले प्रस्तुत गरेको २ सय २४ रनको मध्यम विजयी लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्यान्डले ३३ औं ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा सहजै पुरा गरेको थियो । उपाधिको लागि आईतबार लर्डसमा न्युजिल्यान्ड र इंग्ल्यान्ड भिड्ने छन् ।
पाँच पटकको च्याम्पियन अष्ट्रेलिया पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरिनुका तीन कारण यस प्रकार छन् :
३. गैरजिम्मेवार म्याक्सवेल र मध्यक्रम
एक समय १४-३ को खराब अवस्थामा पुगेको अष्ट्रेलियालाई स्टिभ स्मिथ र विकेटकीपर एलेक्स केरिले चौथो विकेटका लागि १ सय ३ रनको शतकीय साझेदारी गर्दै इनिङ उकास्दै बलियो योगफल सम्म पुग्न सक्ने संकेत देखाएका थिए । तर आदिल राशिदको २८ ओभरको दोस्रो बलमा ठूलो सट खेल्ने धुनमा बाउन्ड्री लाइन नजिकै जेम्श भिन्सबाट केरि ४६ रनमा क्याच आउट हुन पुगे । अष्ट्रेलियालाई बलियो योगफल सम्म पुग्न अर्को यस्तै ठूलो साझेदारीको आवश्यक थियो । तर त्यो जिम्मेवारी कुनै पनि ब्याट्सम्यानले निभाउन सकेनन् ।
केरि आउट भएको चार बलपछि मार्कस स्टोइनिस शुन्यमा एलबी डब्लू आउट भए । स्मिथले एक तर्फबाट रन बटुलीरहँदा अर्कोतर्फ विकेट गुमिरह्यो । ठूलो आसा गरिएका ग्लेन म्याक्सवेल जोफ्रा आर्चरको ३५ ओभरको पाँचौ बाउन्सर बलमा गैरजिम्मेवार सट खेल्दै २२ रनमा क्याच आउट भए । म्याक्सवेल आउट भएसँगै अष्ट्रेलियाको ठूलो योगफलको सम्भावना सकिएको थियो ।
३८ औं ओभरमा प्याट कमिन्स पनि गलट सट खेल्दै ६ रनमा आउट भए । केरि बाहेक अन्य कुनै पनि ब्याट्सम्यानले स्मिथलाई राम्रो साथ दिन सकेनन् । जसको कारण अष्ट्रेलिया सस्तैमा समेटिन पुग्यो । मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानको खराब प्रर्दशन अष्ट्रेलियाको हारको एक कारण हो ।
२. इंग्ल्यान्डको उत्कृष्ट सुरुवात
सामान्य लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्यान्डका ओपनर जोसन रोय र जोनी बेयरस्टोले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाए । १७.२ ओभरसम्म पहिलो विकेटका लागि रोय र बेयरस्टोले १ सय २४ रनको शतकीय साझेदारी गर्दै सहज जित पक्का गरे । सामान्य लक्ष्यमा पनि जित आत्मसात गर्न अष्ट्रेलियालाई पहिलो पावर प्लेमा कम्तिमा सुरुवाती ब्याट्सम्यानलाई आउट गर्न सक्नुपथ्र्यो । जसको दबाबमा मध्यक्रम धरासय बनाउँदै झिनो जित हात पार्न सक्थ्यो ।
सामान्य लक्ष्य पछ्याएको इंग्ल्यान्डले पहिलो विकेटकै लागि उत्कृष्ट शतकीय साझेदारी गरेपछि अष्ट्रेलियाको हार पक्का बनेको थियो । उत्कृष्ट सुरुवातकै कारण जो रुट र कप्तान इओन मोर्गन पनि खुलेर खेल्दै ३३ ओभरमै जित पक्का गरे ।
१. खराब सुरुवात
ब्याटिङ उपयोगि मानिएको बर्मिङघममा मैदानमा अष्ट्रेलियाले टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेपछि धेरैले ठूलो योगफल बनाउन सक्ने आँकलन गरेका थिए । तर अष्ट्रेलियाको सुरुवात नै खराब रह्यो । ओपनर तथा कप्तान आरोन फिन्चलाई दोस्रो ओभरको पहिलो बलमै जोफ्रा आर्चरले शुन्यमा एलवी डब्लू आउट गरे ।
फिन्च आउट भएपछि डेविड वार्नरमाथि ठूलो आसा गरिएको थियो । तर वार्नर क्रिस वोक्सको तेस्रो ओभरको चौथो बलमा दबाबमा गलत सट खेल्दै विकेटकीपर जोनी बेयरस्टोबाट ९ रनमा क्याच आउट हुन पुगे । पिटर हेन्डस्कम्बलाई सातौ ओभरको पहिलो बलमा वोक्सले ४ रनमा बोल्ड आउट गरेपछि अष्ट्रेलिया १४-३ को कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो ।
सुरुवाती दबाबकै कारण अष्ट्रेलियन ब्याट्सम्यान कुनै पनि समय खुलेर खेल्न सकेनन् । स्मिथले एक तर्फबाट रनको लागि निरन्तर संघर्ष गरेपनि अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रर्दशन गर्न नसक्दा अष्ट्रेलिया सेमिफाइनलबाटै बाहिरिनु पर्यो । अष्ट्रेलियाको प्रमुख हारको कारण पनि खराब सुरुवात हो ।
मंगलबार, भाद्र ३१, २०७६
एनओसी निर्वाचन : प्रगतिशील धारको यथास्थितिवाद
सिलवाललाई अवसर !
बलत्कार अभियोगले निकै अप्ठेरो पारेको थियो !
इपिएलअब ‘डी-स्पोर्ट्स’ मा प्रसारण हुने
आर्मी र पुलिसको फाइनल फेरि स्थगित
साफ च्याम्पियनसिप फेरि बंगलादेशमै हुने
‘पुरुष भन्दा महिला टोलीको विश्वकप सम्भावना बलियो’
मंगलबार, भाद्र १०, २०७६
सेन्ट्रल जोन भलिबल- उज्वेकिस्तानको जित
अफगानिस्तानमाथि नेपालको लगातार दोस्रो जित
बिहीबार, श्रावण ३०, २०७६
अफगानिस्तानमाथि नेपालको रोमाञ्चक जित
बुधबार, श्रावण २९, २०७६
अर्जुन कार्की (प्रदेश ४)